Lucy Rees, toerana ambony ho an'ny tontolon'ny soavaly | Soavaly Noti
Lucy Rees, toerana ambony ho an'ny tontolon'ny soavaly
Lucy rees dia avy any Pays de Galles ary heverina ho iray manontolo ambony amin'ny tontolon'ny soavaly. Ity vehivavy ity izay mahazo aina kokoa amin'ny soavaly noho ny an'ny olombelona, ​​dia nianatra momba ny haitao tao amin'ny Oniversiten'i Londres, nanao fampianarana ambaratonga faharoa tao Sussex. Nanomboka soavaly soavaly ary manahirana any an-tendrombohitra Wales any Snowdonia ary teo no nanoratany ireo boky voalohany.
Anisan'ireo boky manan-danja indrindra amin'ny tontolo Equine ny 'Saina soavaly', izay ilazany amin'ny fomba tsotra ny lafiny sarotra indrindra amin'ny fitondran-tsoavaly, izay raisina ho toy ny Baiboly amin'ny akanjo voajanahary. Nanoratra koa izy 'Ny lojikan'ny soavaly'ary asa hafa tsy adika amin'ny teny espaniola toy ny' Wild Pony ',' The Maze ',' Horse of Air 'na' Riding '.
Izany koa dia efa mpilalao sarimihetsika fanadihadiana roa, ny iray ho an'ny fahitalavitra isam-pokontany ary ny iray ho an'ny HTV. Nandritra ny taona maro dia nanitsy ny magazine Mountain izy, natokana ho an'ny tontolon'ny fiakarana, tamin'ny fotoana nanombohany nanao sary an-tsary maro.
Lucy Rees, rehefa avy nitety an'izao tontolo izao izy, dia nipetraka tany an-tendrombohitra La Vera sy Jerte, dia nahatakatra fa izy ireo no toerana mety indrindra amin'ny tetikasany ary nanofa arivo hekitara izay, amin'ny haavon'ny arivo metatra, ny soavaliny roanjato amin'ny fianakavian'i Pottoka dia miaina anaty fahalalahana, ilay zokiny indrindra fantatra.
Amin'ny maha-ambony azy amin'ny equines, dia nitety faritra maro izy, indrindra tany Irlandy, Etazonia ary Portugal, toerana nahitany traikefa be tao kolontsaina sy fomba fanahazaza soavaly. Mampianatra amin'ny oniversite isan-karazany izy ary manoratra matetika amin'ny magazine anglisy sy espaniola.
Mampianatra taranja akanjo voajanahary izy ary manam-pahaizana amin'ny mibitsibitsika amin'ny soavaly sy mahatakatra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » About us » Lucy Rees, toerana ambony ho an'ny tontolon'ny soavaly
Matahotra koa ny soavaly